डा. केसीलाई प्रयोग गरेर वितण्डा मच्चाउन खोजियो: प्रचण्ड – Himalaya TV
Home » समाचार » डा. केसीलाई प्रयोग गरेर वितण्डा मच्चाउन खोजियो: प्रचण्ड
डा. केसीलाई प्रयोग गरेर वितण्डा मच्चाउन खोजियो: प्रचण्ड
८ श्रावण २०७५, मंगलवार १३:०४
काठमाण्डौ, ८ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले डा. गोविन्द केसीलाई प्रयोग गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको अारोप लगाएका छन् ।
पार्टीसम्बद्ध पत्रकारहरूसँग मंगलबार भएको छलफलको क्रममा प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र पार्टी एकताविरुद्ध वितण्डा मच्चाउन खोजिएको अारोप लगाएका हुन् । पार्टी एकता गरेर राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नपाउँदै लडाउने षड्यन्त्र सुरु भएको उनले बताए ।
‘नेपालभित्र कम्युनिस्टले चुनाव जितेको, दुई तिहार्इको सरकार बनाएको, हामीले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गरेको उनीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसैले हाम्राबिरुद्ध कथा बनाएर दिग्भ्रमित पार्ने, बदनाम गर्ने षड्यन्त्र अनुसार संगठित ढंगले मिडिया प्रयोग गरेका छन् ’ उनले भने ।
नियोजित रूपमा सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, मूल नेतृत्वविरुद्ध मिडियाबाट लडाइँ सुरु भएको भन्दै प्रचण्डले सरकार र पार्टीको रक्षाका लागि कसैसँग सम्झौता नगरिने बताए । तलसम्म पार्टी एकीकरण गर्दै सरकार र पार्टीको रक्षाका लागि जनतालाई परिचालन गरिने उनको भनाइ थियो ।